Iingcebiso zeProjekthi yeBakala yeSayensi yeBakala ye-4
Iingcamango zeProjekthi zeZenzululwazi zeSayensi zeSikolo
Iiprojekthi ezifanelekileyo zezesayensi ze-4 ze-science ezibandakanya ukuphendula umbuzo, ukusombulula ingxaki okanye ukuvavanya ingcinga. Ngokuqhelekileyo, utitshala okanye umzali unceda ekusebenzeni i-hypothesis nokuyila iprojekthi. Abagadi be-4 banokuqonda kakuhle iingcamango zesayensi, kodwa bangadinga uncedo kwindlela yezenzululwazi kunye nokuhlelwa kwiposter okanye intetho. Isitshixo ekuphuhliseni iphrojekthi ephumeleleyo kufumanisa ingcamango enomdla kumgcini wesine.
Ngaba iindiza zikhetha ukukhokela? Ukubamba nokukhupha iindile. Bahamba ngayiphi indlela? Ngaba kukho umgangatho oqhelekileyo okanye akunjalo? Unokuzama le projekthi ngeentsana okanye ezinye iintlobo ezinambuzane.
Ngaba i-cubes eqhelekileyo i-cubes iyancibilika kwizinga elifanayo njengoko kucace i-cubes? Yongeza umbala wokutya kwi-tray yecube yecube kwaye uqhathanise ukuba ixesha elide liza kutyutywa njani.
Ngaba i-magnetism iyahamba kuzo zonke izinto? Beka izinto ezahlukeneyo phakathi kombane kunye netsimbi. Ingaba zichaphazela indlela i-magnet ithandwa ngayo kwintsimbi? Ukuba kunjalo, ngaba zonke zichaphazela i-magnetic field?
Ngaba yonke imibala yekrayon idlulileyo efanayo? Dweba umgca wexesha elide kunye nombala owodwa, gwala ubude obufanayo bomgca nomnye umbala. Ngaba zombini iikhrayoni ubude obufanayo?
Iyintoni umphumo wembewu ye-microwaving kwizinga labo lokuhluma? Imbewu yokuvavanya ihluma ngokukhawuleza, njengembewu yokutshiza, kunye namaxesha ahlukeneyo e-microwave, njengemizuzwana emi-5, imizuzwana engu-10, imizuzwana engama-30, 1 iminithi. Sebenzisa ukulawula (akukho microwave) unyango ukuthelekisa.
Ingaba imbewu iya kuhluma xa uyayifaka egazini ngaphandle kwamanzi? Ungazama ubisi, ijusi, iviniga, kunye nezinye izifo eziqhelekileyo zendlu. Ngaphandle koko, unokubona ukuba izityalo ziya kukhula xa 'ziphuziswa' ngamanzi angaphezulu kwamanzi.
Yenza i-windmill elula yokuzenzela. Iyiphi inani elona lifanelekileyo leempahla zomoya?
Ingakanani ityuwa (okanye iswekile) inokunyamezela isityalo? Izityalo zamanzi kunye nesisombululo seseyile okanye iswekile. Uphakame kangakanani ukugxininiseka kwesityalo? Umbuzo ochaphazelekayo uza kuba ukubona ukuba izityalo ziyakwazi ukuphila xa zixutyiswa ngamanzi asepha, njengamanzi asele asele.
Ngaba iintaka zikhetha izinto zokuhlala kwintaka? Ngamanye amagama, ngaba kubonakala ukuba bayanyamekela ukuba indlu yenyoni iyenziwe ngamaplanga okanye iplastiki okanye isinyithi?
Ngaba izibungu zenza ntoni xa zikhanya? Ngaba izibindi zenza ngendlela eyahlukileyo kwimbala eyahlukileyo yokukhanya?
Ngaba izintuthwane zikhetha iintlobo ezahlukeneyo zeswekile? Iindidi ezahlukileyo zentshukela zifumaneka kwitheyibhile yeswekile, ubusi, i- maple isiraphu kunye nama-molasses.
Ngaba unokwenza ulwahlula phakathi kokutya okunamafutha kunye neen-fat-free versions of the same product?
Qhathanisa izinga lokuhlanjululwa kwamanzi eemveliso ezahlukeneyo zeefowuni. Thatha i-1 indebe yamanzi kunye nexesha kuthatha ixesha elingakanani ukudlula kwisihlunu. Ingaba ucinga ukuba umehluko kwixesha lithinta i-flavour yekhofi eyenziwe usebenzisa iifayile?
Amakhandlela amhlophe kunye namakhandlela enemibala atshisa ngezinga elifanayo?
Bhala imiyalezo usebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zeengki ezingabonakaliyo . Yiyiphi eyona nto engabonakaliyo? Yiyiphi indlela eyavelisa umyalezo lula ukufunda emva kokuba ibonakaliswe?
Dlulisa amehlo kule ngqokelela yeeprojekthi ezifanelekileyo zezesayensi ezidibeneyo ngokwezinga lebanga leengcamango ezingakumbi.
Indlela yokwenza iSitempile sakho soKhisimusi
Ulwazi Lwakhelo lweProjekthi eLungileyo yokuThengisa
Indlela yokukhulisa i-Ammonium Phosphate Crystals
Umsi Wokhuseleko lweBhomu
Cool Projects Ice Projects
Indlela yokwenza iCopper Sulfate
Iingcambu - iNtsapho Culicidae
Ukudibanisa isiNgesi esingaqhelekanga sesiFrentshi ('ukwazi')
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: iFumare
Iifoto zeeReferensi zeArab: Izimbali
Indlela uBuddhism Efika ngayo kwiTibet
Abafazi beeNkwenkwekazi zeXeshumi elinesixhenxe: I-Renaissance kunye neBaroque
Berbers - Abafundisi beNtshonalanga Afrika baseNtshonalanga Yembali
Kutheni Ukuhlonipha Abafundi Kubalulekile Kukuphumelela kootitshala
Kumkani uDariyo Mkhulu
Ezi zitsha zeNew Fairway zilungele ukudlala
I-Wicca, Ubuqhetseba okanye iPaganism?
Iingoma ezi-10 eziphezulu zePenki
Ziziphi iingoma ezicatshulwa njengeNdawo eNkulu yeMidlalo yoMntla?
I-Cent, Iphunga, kwaye ithunyelwe
Nantsi indlela yokusebenzisa isibonelelo sokugwema ukunyakaza kwiindaba zakho zeendaba
Ukugqokraza kwi-Shakespeare Plays